अपार्टमेन्ट नै लिएर नेपाली याैन बजारमा रसियन केटिहरु - Purbeli News
अपार्टमेन्ट नै लिएर नेपाली याैन बजारमा रसियन केटिहरु
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण ०७, २०७५ समय: २१:४१:०७
आफूलाई रसियाको बताउने डिनारालाई अंग्रेजी र थोरै हिन्दी बोल्न आउँछन् । हिन्दी बोल्न आउँछ ? भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ हिन्दीमै आयो, ‘थोडा, थोडा आउँछ ।’ उनीहरुले भारतमा पनि यस्तै धन्दामा संलग्न भएर आएकाले भाषा जानेको बताए । ‘नेपाल पनि इन्डियन कन्ट्री नै हो नि, यहाँ पनि धेरैले हिन्दी बोल्दारहेछन्,’ डिनाराको बुझाइ थियो । उनका धेरै ग्राहक भारतीय रहेको समेत उनले खुलाइन् । आफूलाई प्रसिद्ध गायक जस्टिन बिबरको फ्यान बताउने इन्दिराले नेपाली केटाहरु आफूलाई मनपर्ने बताइन् । उनले जस्टिनको गीत बजाएरसमेत सुनाएकी थिइन् । दुवैले आफूहरु नेपालको पोखरा घुम्न गएको र एकदमै सुन्दर लागेको समेत बताएका थिए ।
यसरी यौनधन्दा चलाएको कसैलाई थाहा छैन् ? भन्ने प्रश्नमा उनीहरुले भने, ‘एकदमै सुरक्षित हुन्छ यहाँ । हामी हाम्रो सम्पर्कभन्दा बाहिर मान्छे नै ल्याउँदैनौँ । विशेषगरी नेपालीले सुनाइदिन्छन्, त्यसैले सतर्क रहन्छौँ ।’ आफूले मागेअनुसारको पैसा तिर्न नसक्ने भएकाले पनि उनीहरुले नेपालीसँग कम सम्पर्क राख्ने रहेछन् ।
नेपाली यौनकर्मीका अखडामा छापा मारिएका र पक्राउ परेका समाचार यहाँ खुब आउँछन् तर आफ्नै देशमा विदेशीमूलका युवतीहरु यौन धन्दामा संलग्न रहेकोबारे प्रहरी जानकार नभएको बताउँछ । नेपालमा विदेशी यौनकर्मी छन्, यसबारे तपाईंलाई केही थाहा छ भन्ने प्रश्नमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी रवीन्द्र धानुकले भने, ‘मलाई जानकारी छैन, भएछ भने खबर गरौँला है !’
तीन महिनाअघि लामो समय ठमेलमा इन्चार्ज रहेर काम गरेका डिएसपी राठौरले भने विदेशी यौनकर्मीबारे सूचना आएको बताएका थिए । ‘रसियन, भारतीय, चिनियाँ युवतीहरु नेपाल आएर यौन धन्दामा सक्रिय छन् भन्ने मैले सुनेको छु,’ उनले शुक्रवारसँग भनेका थिए, ‘बाटोमा हिँडिरहेका या डिस्कोमा नाचिरहेका विदेशी युवायुवतीलाई शंका लागेकै भरमा थुन्नु त भएन । प्रमाण भेट्न मुस्किल भएकाले केही गर्न सकिएको छैन ।’
नेपाली यौन बजारमा फाट्टफुट्ट विदेशी यौनकर्मी नभेटिने हैनन् । २०६६ सालमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले ठमेलको हिमालयन जाभा रेस्टुराँ पछाडीको तीन तले घरमा छापा मार्दा पूरै घर भाडामा लिएर यौन व्यवसाय चलाएका १४ चिनियाँ युवती पक्राउ परेका थिए । त्यसयता भने विदेशी यौनकर्मी पक्राउ परेका छैनन् ।
पक्राउ नपरे पनि काठमाडौंमा उनीहरुको उपस्थिति भने बाक्लो छ । यहाँ थुप्रै देशका युवतीहरू कलगःलको रूपमा सक्रिय छन् । अधिकांश विदेशी यौनकर्मीको मिट प्वाइन्ट ठमेल, दरबारमार्ग र ललितपुरको झमेल नै हो । ग्राहकको मागअनुसार उनीहरू उपत्यकाबाहिर समेत जाने गरेको पाइएको छ ।
संवाददाताले भेटेका दुवै ‘रसियन कलगःल’ इन्दिरा र डिनाराले फेसबुक चलाउँछन् । उनीहरुको मोबाइल नम्बरको सहायताले संवाददाताले फेसबुक पत्ता लगाएको थियो । आफूलाई रसियन बताए पनि फेसबुकमा उनीहरुले आफू कजाकस्तानमा बस्ने र उज्बेकिस्तानबाट आएको भनेर आफ्नो ‘इन्ट्रो’मा जानकारी दिएका छन् ।
उनीहरुका अनुसार रसियन कलगःलको प्रमुख ‘मिटप्वान्ट’ भने पाँचतारे होटलमा सञ्चालित क्यासिनो नै हुन् । भेटघाटको अन्त्यमा डिनारालाई नेपाल आएर कसैसँग प्रेममा परिएको छ कि छैन भनेर ठट्यौली शैलीमा प्रश्न सोधिएको थियो । उनले जवाफ दिएकी थिइन्, ‘आइ डन्ट बिलिभ गाई’ अर्थात् ‘म केटा मान्छेलाई विश्वास गर्दिनँ ।’ नागरिकन्युज/शुक्रवारबाट